आजको संसारमा, एक मानिसले आफ्नो जीवनलाई सहज र कार्यात्मक बनाउन खोज्छ। यो यो काम र घर मा प्रक्रियाहरु को धेरै स्वचालित कि उपकरणहरू र ग्याजेटहरू सबै प्रकारका द्वारा मदत छ।
मोटर वाहन बजार मा, तपाईंले सडक ध्यान र दुर्घटना मा रही जोखिम कम गर्न मद्दत गर्न डिजाइन सुप को एक किसिम, पाउन सक्नुहुन्छ। एक यस्तो उपकरण वर्षा सेन्सर छ।
केही वर्ष पहिले, यस्तो सेन्सर अब तपाईं र पनि सबै उपलब्ध मा मध्यम वर्ग को मिसिन मा एक समान उपकरण पाउन सक्नुहुन्छ गर्दा मात्र लक्जरी कार लागि सेट कारखाना हो कम लागत कार।
साथै, आफ्नो हातले एक वर्षा सेन्सर पनि खातामा लिएर सुविधाहरू सेट गर्न सकिन्छ। यो यस्तो यन्त्र नजिकै गाडीको अगाडीको शिशा मा स्थापित हुनुपर्छ भनेर सम्झनु पर्छ rearview दर्पण वाहन सानो घर मा। यो नियुक्ति दृश्यात्मकता कम छैन र त्यसैले, बाटोमा अभिमुखीकरण हस्तक्षेप गर्दैन त्यहाँ वर्षा सेन्सर बाहिर सेट मौका द्वारा चयन भएको छैन।
यो ग्याजेटको कार्य को सिद्धान्त विचार, तर के वर्षा सेन्सर पत्ता लगाउन सुरु गर्न।
यो उपकरण एक अप्टिकल-इलेक्ट्रोनिक यन्त्र windscreen को गीला को डिग्री गर्न उत्तरदायी छ। निम्नानुसार आफ्नो काम हो: उत्सर्जित इन्फ्रारेड विकिरण को एक बीम ज्योति को ग्लास भागमा छरिएका छ, र केही प्रतिबिम्बित छ र विशेष उच्च-संवेदनशीलता सेन्सर जहाँ कब्जा फिर्ता फर्काउँछ। मौसम अवस्था, साथै ग्लास को दूषण को डिग्री आधारमा प्रतिबिम्बित प्रकाश को मात्रा फरक हुनेछ। आवश्यक छ भने, wiper सिस्टम सक्रिय निर्मित वर्षा सेन्सर माइक्रोप्रोसेसर, प्राप्त जानकारी प्रक्रियाहरु र।
निम्नानुसार यस यन्त्रको लाभ हो:
आफ्नो कार पछि मौसम नियन्त्रण।
, दिन को समय को लागि लेखांकन मानव आँखा को संवेदनशीलता सहित।
वाहन गति आधारमा wiper स्ट्रोक आवृत्ति परिवर्तन।
को windscreen को सर्वोत्कृष्ट सफाई।
को windscreen एक ड्राई सतह मा wiper ब्लेड को आन्दोलन रोक्दा।
wiper सिस्टम स्वतः नियन्त्रित छ।
सिर्फ एक को कमी - त्यहाँ वर्षा सेन्सर चिस्यान, एक औंठाछाप वा हावा बबल को अनियमित ड्रप मा काम गर्दछ मौका छ। यस्तो अवस्थामा संभवतः ग्लास प्रणाली लागि सेन्सर र यसैले समावेश एक स्थायी सञ्चालन। झूटा सकारात्मक रोक्न राम्ररी ग्लास धुन र आफ्नो औंलाहरु संग स्पर्श गर्न प्रयास गर्न आवश्यक छ।
एक रोचक तथ्य माटो प्रवेश मा वर्षा सेन्सर काम गर्ने छैनन् भन्ने छ। यो माटोको मिश्रण को गुण यन्त्र द्वारा मान्यता प्राप्त छन् ती फरक भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
सारांशमा गर्न, वर्षा सेन्सर -, सुरक्षा को एक उच्च स्तर प्रदान जो द्वारा चालक सडक बाट विचलित छैन एक कार्यात्मक र सुविधाजनक उपकरण, को windscreen र wiper रूपमा सेवा जीवन बढ्छ।
को समायोजन वाल्व आफ्नै हातले (VAZ-2108) कस्तो छ?
बीएमडब्ल्यू 528i: प्राविधिक विनिर्देशों, फोटो र समीक्षा
कृत्रिम मोटर तेल, "रल्फ": ग्राहक समीक्षा
सेन्सर Knock। संचालन र प्रमाणिकरण सिद्धान्त
जाडो टायर "Kama 505" (कांडा): समीक्षा, परीक्षण, विशेषताहरु
आधारभूत नियमहरू स्थापना गर्दा - जडान आफ्नो हातमा संकेत
डोनाल्ड ट्रम्प: रूसको रवैया र रूस र पुतिनको बारेमा बयान
अनाज पास्ता: खाना पकाउने विधि
तपाईंको hyacinths फिक्का: अर्को के?
पीसी: काम सुविधाहरू, को विशिष्टता र आवश्यकताहरु
घरमा रूपमा ओवन सफा गर्न? आत्म-सफाई ओवन को समारोह
"Clarens" Lipsticks: वर्णन, प्यालेट, निर्माता र समीक्षा
सरल नुस्खा gedlibzhe (kabarda मा क्रीम मा चिकन)
Phraseologism मूल्य र उपयोग उदाहरण: "आफ्ना आस्तीन रोलिंग"। छोटो आस्तीन - मेहनत को एक चिन्ह
«परमेश्वरको हामी विश्वास» - परमेश्वरले हामी विश्वास गर्छु। पैसा बाँकी!